စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အခါဥရောပရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမြို့တော်သို့သွားရောက်ခြင်းမှကြွလာ, လန်ဒန်တိုင်းခရီးသွားဧည့်ရဲ့ဆန္ဒစာရင်း၏ထိပ်မှာသခြောသည်နှင့်လုပ်ပါရန်အများအပြားအရာလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ရှိပါတယ်. ဒါဟာတာရှည်တယ်ရဲ့, စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်း; လှပသောအထင်ကရအဆောက်အနှင့်မြင်ကွင်းများ; and there’s plenty of things to…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ သငျသညျအမ်စတာဒမ်မှခရီးစဉ်စီစဉ်ပေမယ့်နေဆဲသွားကြဖို့အကောငျးဆုံးအခြိနျထွက်ရှာဖွေခဲ့ပြီးပြီဆိုပါက, သငျသညျစားသောက်ဆိုင်အပတ်စဉ်ခရီးစဉ်ကိုစဉ်းစားရန်လိုပေမည် 2019 နယ်သာလန်နိုင်ငံ. Restaurant Week isaculinary event that takes place annually all over the world…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဒီ post မှာတော့, ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ဒေသခံရထားလက်မှတ်စာအုပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်. အမြားအပွားကိစ္စများတွင်, ခရီးသွားများအတွက်ပြီးခဲ့သည့်အခိုက်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်မှတ်ဘွတ်ကင်လေ့. ရထားလက်မှတ်တွေနောက်ဆုံးမိနစ် booking လုပ်ဖို့ပညာရှိတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး. ဤ…